गंग को चार, या साहब बंग , माओ जेडोंग को शासन को उत्तराधिकारी को समयमा चार प्रभावशाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को आंकडे को एक समूह थियो। गंग मा माओ को पत्नी, जियांग किंग, र उनको सहभागिहरु वान हांगवेन, याओ विएयुआन, र जोङ चुकुआओ शामिल थिए। वांग, याओ, र जङ्ग शाङ्घाईका सबै प्रमुख अधिकारीहरू थिए। उनीहरूले सांस्कृतिक क्रांति (1966- 76) को समयमा अग्रगामी हुनुभयो, चीनको दोस्रो शहरमा माओका नीतिहरू धकेल्दै।
जब माओको स्वास्थ्यले त्यो दशकमा गिरावट ल्यायो, उनीहरूले धेरै प्रमुख सरकारी कार्यहरू नियन्त्रण गरे।
यो स्पष्ट छैन कि चार को गंगाले वास्तवमा सांस्कृतिक क्रांति वरिपरि नीति र निर्णयहरूमा अभ्यास गरे र कुन हदसम्म उनीहरु माओ को इच्छाहरु मात्र चलाए। यद्यपि देशभरको सांस्कृतिक क्रांति लागू गर्ने लाल गर्डहरूले माओको राजनैतिक क्यामेरालाई पुनर्जीवित गरे तापनि तिनीहरू पनि चीन र विनाशको खतरनाक डिग्री पनि ल्याए। अराजकताले सुधारवादी समूहको बीचमा राजनीतिक संघर्ष बढायो, जसमा डें ज़ियाओपिंग, झो एनलिई, र य जुआइईइङ, र ग्यांग ग्यांग सहित।
9 सेप्टेम्बर 1 995मा माओ मा मृत्यु हुँदा, गंग अफ द म्याचको नियन्त्रण लिन खोजे, तर अन्तमा, कुनै प्रमुख खेलाडीले शक्ति पाएनन्। माओ को छनौट र उनको अन्तिम उत्तराधिकारी पहिले केहि ज्ञात थियो तर सुधार-मन भयो भयो Guofeng।
हानले सार्वजनिक रूपमा सांस्कृतिक क्रांतिको अभावलाई इन्कार गरे।6अक्टोबर, 1983 मा, उनले जियांग किंग र उनको कबालका अन्य सदस्यहरूको गिरफ्तारीको आदेश दिए।
औपचारिक प्रेसले विष्फोट अधिकारीहरूलाई आफ्नो उपनाम दिएका छन्, "द गंग ग्याङ्ग", र उनीहरूको जीवनको अन्तिम वर्षमा माओले उनीहरूको विरुद्धमा परिवर्तन गरे।
यसले तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई सांस्कृतिक क्रांतिको अभावको लागि दोषी ठहरायो, जसलाई जियांग र तिनका सहयोगीहरूको विरुद्धमा बहुमतको एक राष्ट्रव्यापी दौर स्थापित गरियो। शाङ्घाईका तिनीहरूका प्रमुख समर्थकहरूले सम्मेलनको लागि बीजिंगलाई निम्तो दिए र तुरुन्तै पक्राउ गरेको थियो।
ट्रेसनका लागि परीक्षणमा
1981 मा, ग्याङ्ग अफ द म्याचका सदस्यहरूले राजतन्त्र र चिनियाँ राज्य विरुद्ध अन्य अपराधहरूको लागि परीक्षणमा गए। सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा 34,375 व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र साथसाथै तीन-चौथा एक लाख निर्दोष चिनियाँको सतावट थियो।
परीक्षणहरू देखाउन सख्त रूपमा थिए, त्यसैले तीन पुरुष प्रतिबन्धहरू कुनै पनि सुरक्षामा माउन्ट थिएनन्। वाङ हांगवेन र याओ वेन्युआ दुवैले सबै अपराधहरूलाई स्वीकार गरे जुन तिनीहरू चार्ज गरिएको थियो र उनीहरूको पश्चाताप प्रदान गरे। झाङ चुनभुआ चुपचाप र दृढतापूर्वक आफ्नो निर्दोष बनाए। अर्कोतर्फ जियांग किंग, उनको चिहानमा चिच्याएर रित्तो र रित्तो, उनी निर्दोष थिइन् र मात्र उनको पति, माई जेडोंगका आदेशहरू पालन गरे।
चारको सजायको गंगा
अन्तमा, सबै चार जना प्रतिबन्धी दोषी ठहरिएको थियो। वांग हांगवनलाई जेलमा सजाय दिइएको थियो; उनी 1 994मा एक अस्पतालमा रिहा गरियो र सन् 1 992मा 56 वर्षको उमेरमा एक निर्दिष्ट जिगर रोगको मृत्यु भयो।
याओ वान्युआनले 20-वर्षको सजाय पाएका छन्; उनी 1 996मा कैदबाट रिहा गरियो र सन् 2005 मा मधुमेहको जटिलताबाट निस्क्यो।
दुवै जियांग किंग र जङ्ग चूनभुआलाई मृत्युको सजाय दिइएको थियो, यद्यपि उनका वाक्य पछि जेलमा जीवन बिताइयो। जियांगले 1984 मा आफ्नो छोरीको घरमा घरको गिरफ्तारीमा लगाइदिए र 1 99 1 मा आत्महत्या गरे। उनीहरूले गलाँसको क्यान्सरको निदान गरे र उनीहरुलाई अवस्थाबाट अबसम्म पीडित हुनबाट जोगिन थाले। झांग 1 99 8 मा पेन्टिफ्रेसी कैंसरको निदान गरे पछि जेलमा मेडिकल ग्राउन्डमा रिहा गरियो। उनी 2005 सम्म बसे।
चीनको जन गणराज्यको लागि चार गंगाको बाढीले व्यापक परिवर्तनको संकेत गर्यो। ह्वा ग्वाफेंग र पुनर्वासित डेंगियाओपिंग अन्तर्गत, चीनले माओ युगको सबैभन्दा खराब अभावबाट टाढा गए।
यसले संयुक्त राज्य र अन्य पश्चिमी देशहरूसँग राजनयिक र व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्यो र दृढ राजनीतिक नियन्त्रणसँग जोडिएको आर्थिक उदारीकरणको वर्तमान कोर्सलाई पछ्याउन थाले।
वाइकिंग्स - एक अवलोकन
पम्पीको पत्नी को थिए
ओस्टपोलिटिक: पश्चिम जर्मनीले पूर्वी कुरा गर्दछ
गेंगिस खानको जीवनी
Chaldean Babylonian King Nebuchadnezzar II
सलादिन, इस्लाम को हीरो
समयको बारेमा 20 दर्शकहरू
बच्चाहरु र अभिभावकहरूका लागि ब्यालेटको लागि मार्गदर्शक
कसरी जर्मन उमलायो वाहल्स मा
स्टीव अस्टिन टाइमलाइन
एक लुकेको स्टेज भनेको हो?
स्पेनिश मा अर्थ को परिवर्तन 'सेर' या 'एस्टार' को उपयोग मा निर्भर गर्दछ
भाषा अध्ययनमा पाठ के हो?
Kwanzaa:7सिद्धान्तहरु अफ्रीकी सम्पदा को सम्मान को लागि
लीन-बर्न इन्जिन के हो?
जर्मन अक्षय समाप्ति: नामांकनिक प्रकरण
शीर्ष पुरुष स्की पैंट
तरिकाहरू विद्यार्थीहरूलाई Misbehave र यो शिक्षकहरूले के गर्न सक्छन्
एक्सेल अनलाइनमा रङ नम्बरहरू
हनुकुका परम्पराहरु बच्चाहरु को लागि
क्यानाडामा अमेरिकी डलरको प्रभाव
सुपर स्टेसन टेक्निकलहरूको सूची
तपाईंको विद्यार्थीहरूको ध्यान प्राप्त गर्नका लागि सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
यो आम जर्मन गल्तीबाट सावधान रहनुहोस्: 'आईच बिन काल'।
चित्रा स्केटिङ शो को पछि पूर्ण स्टोरी "ताराहरु बर्फ"
अकबर महान, मुगल भारत का सम्राट
सेन्ट फ्रान्सिस विश्वविद्यालय प्रवेश
सामान्यतया कन्फिगर गरिएका शब्दहरू: बोर्ड र बोर
यो संसारको सबैभन्दा ठूलो क्याल्डर हो
ब्लू ग्रह ग्रहण अन्वेषण